'विनोद थापा जो कोरोनाविरुद्धको लडाइमा अग्रपंक्तिमा खटिएका छन्' - PLA Khabar
‘विनोद थापा जो कोरोनाविरुद्धको लडाइमा अग्रपंक्तिमा खटिएका छन्’
2020-08-29 2020-08-30 Tulasi Nepal
काठमाण्डौ – विश्वव्यापी स्वास्थ महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीको नयाँ ‘हटस्टप’ संघीय राजधानी काठमाण्डौ बन्न लागेको प्रयाप्त संकेत देखिएका छन् । यस्तोमा राजधानीलाई कोरोना बाट बचाउन अग्रपंक्तिमा खटिएका काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नम्बर १४ का जनप्रतिनिधि विनोद थापासँग पिएलए खबरका लागि तुलसी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं:
पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेको छ, वडा नम्बर १४ को अवस्था कस्तो छ ?
विश्वव्यापी स्वास्थ संकटका रुपमा देखापरेको कोभिड-१९ को प्रभाव हाम्रो वडामा पनि पर्नु स्वभाविक हो । अहिलेसम्म हाम्रो वडामा कोभिड-१९ का संक्रमितको संख्या ११७ पुगेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म हाम्रोमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छैन् । यो हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा कोभिड नियन्त्रणकै लागि निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ, त्यसको पालना कत्तिको भै राखेको छ ?
पक्कै पनि कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि अहिले उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प छन् अपवादलाई छाडेर निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना भएको छ ।
बल्खु तरकारी तथा फलफूल बजारमा भने भौतिक दूरी कायम नभएको भन्ने कुरा आइरहेका छन् । हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म निषेधाज्ञा तोड्ने वा त्यसलाई अवज्ञा गर्ने काम कतैबाट भएको छैन् । नागरिकले स्वतस्फूर्त रुपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण वडाबासीले हामीलाई जसरी सहयोग गर्नुभएको छ । त्यसको लागि हामी वडाबासीप्रति ॠणी छौं ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि व्यक्तिगत रुपमा तपाईं सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा खटिनु भएको छ तर, वडा अध्यक्ष सहित वडाका अन्य पदाधिकारी निष्क्रिय हुनुभएको होला ?
कोभिड-१९ मानव समाजले भोगेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ संकट हो । यसका विरुद्ध सुरुमा हामीलाई पनि आइडिया नभएकै हो । कोभिड नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिनु हाम्रो दायित्व हो । हामीले वडाबासीका हरेक समस्यामा साथ दिन्छौ भनेर कमिटमेन्ट गरेका छौँ । हामी हाम्रो प्रतिबद्धता बाट बाहिर जान सक्दैनौं । म जनतासामु विगतमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दिलो ज्यानले लागेको छु । अरुको कुरा त मैले गर्न मिल्दैन पनि त्यो वडाबासीले कमेन्ट गर्ने विषय हो ।
अर्कोतिर म वडाबाट सबैभन्दा धेरै जनमत पाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ, स्वभाविक रुपमा म वडाबासीप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । बढी मत पाउनुको अर्थ बढी जिम्मेवार हुनु हो । त्यसकारण म अग्रपंक्तिमा देखिनु स्वभाविक हो । अर्कोकुरा स्थानीय युवा वा वडाबासीले कुनै समस्या पर्दा मलाई सम्झिनु हुन्छ, त्यो उहाँहरुको अपेक्षा पूरा गर्नको लागि पनि म सक्रिय भएको देख्नुभएको होला । अरु पदाधिकारी पनि सक्रिय हुनुहुन्छ होला ।
वडामा केही अन्तरसंघर्ष पनि छ भन्ने सुनिन्छ नि, के हो वास्तविकता ?
अहिले संकटको समयमा सबै एकजुट हुने समय हो । यो बेला हामी भित्रका असहमतिका कुरा प्रकट गर्ने समय होइन । यद्यपि कुनै पनि क्रियाशिल संगठन वा निकायमा केही अन्तरसंघर्ष हुनु अस्वभाविक पनि होइन । यसले कोभिड विरुद्धको लडाइमा हामीलाई असर गरेको छ कि भन्ने प्रश्नको आशय हो भने त्यस्तो होइन । अपवाद केही हुन पनि सक्छ अन्यथा त्यस्तो होइन ।
कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि बजेटको व्यवस्थापन कसरी भैराखेको छ ?
बजेट व्यवस्थापनको कुरा गर्दा अहिलेसम्म महानगरपालिका वा १४ नम्बर वडाले कुनै छुट्टै बजेको व्यवस्था गरेको छैन् । अघिल्लो पटक लकडाउन हुँदा महानगरले राहत वितरणका लागि १५ लाख उपलब्ध गराएको थियो, त्यसमा करिब ९ लाख राहतमा खर्च भयो बाँकी महानगरमा नै फिर्ता गयो ।
अहिले निषेधाज्ञाको समयमा कुनै बजेट आएको छैन् । कोभिड संक्रमित फेला परेको ठाउँमा हामीले व्यक्तिगत तवरले नै स्यानिटाइज गर्दै आएका छौं । संक्रमित भेटिएको प्रत्येक ठाउँमा हामीले हाम्रो पहल तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा स्यानिटाइज लगायतका अन्य अत्यावश्यक काम गर्दै आएका छौँ ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वा मजदुरको अवस्था कस्तो छ ? खासगरी जो यहाँका स्थानीय होइनन् भाडामा बसेका छन्, उनिहरुको अवस्था कस्तो छ ?
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वा कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरुको समस्या अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा आएको छैन् । तर पनि हामीले वडाका व्यवसायीहरुलाई लकडाउन वा निषेधाज्ञाको समयमा पनि आफ्नोमा काम गर्ने कामदार वा मजदुरलाई सके सम्पूर्ण नसके पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत तलब दिन आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
यद्यपि यो अवधिमा पनि कसैलाई समस्या पर्‍यो भने हामी समस्याको सहजीकरण गर्न तयार छौँ । सम्पूर्ण समस्याको समाधान हामीले गर्न नसकौंला तर, केही सहायता भने अवश्य गर्छौ । त्यसको लागि हामी सदैब तयार छौँ ।
कोभिड नियन्त्रणको यो अभियानमा महानगर, प्रादेशिक र संघीय स्तरका जनप्रतिनिधिको सहयोग कस्तो छ ?
यो संकटको समयमा महानगर सहित प्रदेश सांसद अजय क्रान्ति शाक्य र संघीय सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त गरेका छौँ । उहाँहरु पनि संकटको समयमा जनताको साथमा हुनुहुन्छ । हामीलाई गाइडलाइन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको सहयोगको लागि हामी उहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझै सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छौ ।
कोभिड-१९ को महामारीको यो समयमा वडाबासीले हामीलाई गर्नु भएको सहयोगमा प्रति आभारी छौँ । तपाईंहरुको सहयोग बिना यो संकट हामी एक्लैले पार लगाउन सक्दैनौं । संकटको समयमा हामी तपाईंको साथमा खडा छौँ ।
अहिलेसम्म हाम्रो आग्रह मानेर लकडाउन वा निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्नुभएको छ । केही समय हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दिनुस हामी यो संकटबाट पक्कै पनि बाहिर आउन सक्छौं । सबैले एक अर्कालाई विश्वास र हातेमालो गर्दै यो अभूतपूर्व मानवीय संकटको सामना गरौँ भन्न चाहान्छु ।
Posted in अन्तर्वार्ता, राजनीति, शिक्षा/स्वास्थ्यTagged विनोद थापा
1 thought on “‘विनोद थापा जो कोरोनाविरुद्धको लडाइमा अग्रपंक्तिमा खटिएका छन्’”
जनताको दुखमा हातेमालो गर्ने पो असली जनप्रतिनिधि!! मुखले रामराम भन्ने काममा च्याँखे थाप्ने प्रब्रितिका व्यक्ति खै कसरि जनप्रतिनिधि??